Iwo Anonyora Masitaera Ekutaura Nenyaya maringe neCorporate Taura
Kutaura nyaya pamwe neCorporate Taura
China, Gunyana 22, 2011 Chitatu, July 23, 2014 Douglas Karr
Makore mazhinji kumashure ndakasimbiswa mune yekuhaya nzira inonzi Targeted Sarudzo. Imwe yekiyi dzekubvunzurudzwa nemumiriri mutsva yaibvunza mibvunzo yakavhurika iyo yaida kuti mukwikwidzi ataure a nyaya. Icho chikonzero ndechekuti zvaive nyore kwazvo kuti vanhu vaburitse mhinduro yavo yechokwadi kana iwe ukavabvunza kuti vatsanangure nyaya yese pane kuvabvunza iwo hungu kana kwete mubvunzo.
Iwe unoshanda zvakanaka nemisi yakamanikana? Mhinduro: Hongu
Yakagadziriswa… Unogona kundiudza nezve imwe nguva kubasa kwawakanga uine nguva dzinoverengeka dzakasimba dzaizove chinetso, kana kuti pamwe zvisingaite, kuita? Mhinduro: Nyaya yaungabvunze yakawedzera ruzivo nezvayo.
Nyaya dziri kuratidza uye inokanganwa. Vazhinji vedu hatirangarire kuburitswa kwekupedzisira kwatakaverenga, asi isu tinorangarira yekupedzisira nyaya yatakaverenga - kunyangwe dai yaive yebhizinesi. Iyo Orabrush nyaya ndiyo yekupedzisira inouya mundangariro kwandiri.
Zvemukati marongero epamhepo anoda kuti tirege kushambadzira uye kutaura kwekambani titange kutaura nyaya. Iri zano rakakosha neChipatimendi Blogging. Vanhu havadi kunzwa yemubatanidzwa-taura nezvekambani yako, chigadzirwa kana sevhisi, ivo vanoda kunzwa chaiko nyaya dzekuti vatengi vako vari kuita zvirinani nekuita bhizinesi newe!
The Hoffman Agency yakagadzira infographic pa Kutaura nyaya vs. Corporate Taura. Iwe unogona zvakare kuverenga zvakawanda nezve maitiro ekutaura nyaya paLou Hoffman's blog, Kona yaIshmaeri.
Tags: anecdotalBoronkutapaakasunungukakumanikidzanhauriranocorporate tauradullkufaraumharemukatiishmaels konajargonjarringmundanenhoroondochimhingamupinyikunzezvechokwadirobotickutengwatsvedzereramunyu wakatsetsekayakarongwaStorytellingunakuhoffman agencymashokokunyorazvitaera zvekunyora
Douglas Karr Thursday, September 22, 2011 Wednesday, July 23, 2014
Isu tiri Indentured Varanda veGoogle
Yemunharaunda Kutsvaga Kugadziridza Hakureverere Nyika kana International Kugadziridza
Sep 22, 2011 na6: 46 PM
Kutenda nekutora nguva yekuona yedu infographic pakutaura nyaya
Muenzaniso wako uchishandisa nzira yekubvunzurudza yakanaka. Ruzivo rwedu nemibvunzo yakazaruka runosimbisa kuti munhu wese anokwanisa kutaura nyaya.
Zvino, mumwe anogona kunge asina kubwinya kweConan kana kurumwa kwaChris Rock, asi izvo zvakanaka
Kwekambani, chinangwa hachisi chekuti ivo vaseke mumavhiri.
Chinangwa ndecheku "batanidza."
Sep 22, 2011 na6: 57 PM
Iwe unotengesa, Lou!
David O. Andersen
May 30, 2012 pa 3: 53 AM
Yakakura posvo uye yakasimba poindi. Kutaura nyaya kunogona kushandiswa mune dzakasiyana mamiriro uye kazhinji kunowanzo kuve kunonakidza kupfuura kubatirana kwekambani. Aida infographic futi 🙂